What is SEO and How it works in Myanmar - DigitalMarketing.com.mm
December 28, 2020 ♥40Likes
SEO/ Search Engine Optimization ဆိုတာဘာလဲ?
– One Sentence Definition
Search Engines (Google, Bing, Yahoo) စတာတွေမှာ ဝယ်သူတွေ သိချင်တာကိုရှာဖွေတဲ့အခါ သင့် Website ကိုတွေ့ရှိပြီး ဝင်ရောက်လာဖို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်သိချင်တာရှိလို့ Google မှာရှာဖွေတဲ့အခါ အထက်ပါပုံအတိုင်း Web Pages ပေါင်းများစွာ ထွက်ကျလာမှာပါ။
ဒီထွက်ကျလာတဲ့ Web Pages တွေအများကြီးထဲက သင်ဘယ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ကြည့်ရှုဖြစ်လဲ?
သေချာပါတယ်။ ရှေ့ဆုံးစာမျက်နှာမှာမှ အပေါ်ဆုံး Website နှစ်ခုသုံးခုထဲကနေပဲ ရွေးချယ်မှာပါ။
ဒီလိုရွေးချယ်တာ သင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာ အောက်ပါပုံမှာပြထားတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေအရ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Web Pages ရဲ့ တည်နေရာပေါ် မူတည်ပြီး Click Rate ကွာခြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ သင့် Website သာထိပ်ဆုံးမှာရှိနေရင် ဝင်လာမယ့်ကာစတမ်မာတွေဆိုတာ မတွေးရဲစရာပါပဲ။
ဒါကြောင့်လည်း Websites တွေအားလုံးက ရှေ့ဆုံးစာမျက်နှာကို ရောက်ချင်ကြပါတယ်။ အပေါ်ဆုံးကို တက်ချင်ကြပါတယ်။
ဒီအတွက် Search Engine Optimization ဆိုတာကြီးကို လုပ်ဆောင်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ထပ်ပြောရရင် SEO ဆိုတာ သင့်ကာစတမ်မာတွေ Search Engine တွေမှာ ရှာဖွေတဲ့အခါ ထွက်ကျလာတဲ့ Search Results တွေရဲ့ ရှေ့ဆုံးစာမျက်နှာ အပေါ်ပိုင်းကို ရောက်နိုင်သလောက် ရောက်စေဖို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
SEO ကနေ သင်ဘာတွေရမှာလဲ?
Quality of Traffic – သင့်ကာစတမ်မာတွေ Google မှာရှာဖွေတဲ့အခါ လေ့လာဖို့ (သို့) ဝယ်ယူဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရှာဖွေတဲ့အရာနဲ့ သင့်ပေးနိုင်တဲ့အရာ ကိုက်ညီတဲ့အခါမှာ အရည်အသွေးပြည့်မှီတဲ့ Traffic တွေရရှိစေပါတယ်။
Quantity of Traffic – Google မှာ Ranking ကောင်းသွားပြီဆိုရင် သင့်ဆီကို နေ့စဉ်ရက်ဆက် Traffic တွေ တက်နေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကာစတမ်မာပေါင်းများစွာ သင့် Website ထဲကို နေ့စဉ်ဝင်ထွက်နေတော့မှာပါ။
Organic Results – SEO လုပ်ဆောင်တုန်းမှာ အချိန်ယူရပေမယ့် Ranking မြင့်တက်သွားပြီဆိုရင် သင်ကြော်ငြာခ ပေးစရာမလိုဘဲ ရလဒ်တွေရရှိတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Paid Ads တွေလည်းရှိပေမယ့် သင်ကတော့ တပြားမှပေးစရာမလိုဘဲ ထိပ်ဆုံးကို ရောက်ရှိနေမှာပါ။
Google, Bing, Yahoo စတဲ့ Search Engines တွေမှာ Bots တွေကိုအသုံးပြုပြီး Websites တွေရဲ့ Web Pages တစ်ခုချင်းကို Crawl လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ Crawl လုပ်တယ်ဆိုတာ ဒီ Web Page တွေကနေ အချက်အလက်တွေကို စုဆောင်းပြီး index တစ်ခုအနေနဲ့ သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့နောက်မှာတော့ index ထဲက Pages တွေကို Ranking Factors တွေအများကြီးပါဝင်တဲ့ Algorithms နဲ့တိုက်စစ်ပြီး Query တစ်ခု (Keyword တစ်ခု) အတွက် အထက်အောက်ပေါ်မယ့် အစဉ်လိုက်ကို သတ်မှတ်ပေးပါတယ်။
သင်သိထားဖို့လိုတဲ့ SEO ဝေါဟာရများ
SEO လုပ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ နားလည်ထားဖို့လိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ ရှိပါတယ်။
အရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်တာကြောင့် အရင်ဆုံး ပြောရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ SEO လုပ်ဆောင်တဲအခါ Keywords တွေနဲ့ Keywords Research အကြောင်းသိရှိထားဖို့ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။ (Keywords Research ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနဲ့ Keywords တွေအကြောင်းအသေးစိတ်ကို ထပ်မံဖော်ပြပါမယ်။)
Inbound Links ကတော့ Website ထဲမှာဘဲ Web Pages တွေအချင်းချင်း Links ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ SEO Score မြင့်တက်ဖို့ Web Pages တွေမှာ ကိုယ့် Website ရဲ့အခြား Web Pages တွေကို လှမ်းချိတ်ထားတဲ့ Inbound Links တွေပါဝင်ရပါမယ်။
Outbound Links ကတော့ ကိုယ့် Web Pages တွေထဲမှာ အခြားသော Websites တွေရဲ့ Web Pages တွေကို ချိတ်ဆက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ရေးသားဖော်ပြတဲ့ အကြောင်းအရာကို နားလည်စေဖို့ အထောက်အပံ့ပေးမယ့် အခြားသော Web Pages တွေကို Link ချိတ်ထားခြင်းက SEO Score မြင့်တက်စေဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။
Keywords တစ်ခုကိုရှာလိုက်လို့ Search Results မှာ Web Pages တွေကျလာတဲ့အခါ အပြာရောင် Title အောက်မှာ အမည်းရောင်နဲ့ရေးထားတဲ့ စာသားအပုဒ်ကို Meta Description လို့ခေါ်ပါတယ်။ Meta Description တွေက ဆွဲဆောင်မှုရှိဖို့လိုပြီး Click Rate မြင့်တက်ဖို့ အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Alternative Text ဆိုတာကတော့ Web Page တွေမှာ ပုံ (Image) တွေထည့်ထားတဲ့အခါ Connection မကောင်းလို့ မပေါ်တဲ့အခါမှာ အစားထိုးပြသပေးတဲ့ စာကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ သင်က ကြောင်လေးတွေ ချောကလက်ကိတ်မုန့်စားတဲ့ပုံ ထည့်ထားတယ်ဆိုရင် “Cats eating Chocolate Cake” လို့ Alternative Text အနေနဲ့ ပေးထားရမှာပါ။
SEO Score ကတော့ SEO ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာ သတ်မှတ်ပေးတဲ့ အညွှန်းကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့ဆုံးစာမျက်နှာပါဝင်ဖို့ ယှဉ်ပြိုင်မယ်ဆိုရင် အမှတ် 80 ကျော် အစိမ်းရောင်ဖြစ်တဲ့အထိ လုပ်ဆောင်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ SEO Score မြင့်တက်လေ သင့်အတွက် အခွင့်အလမ်းပိုကောင်းလေ ဖြစ်ပါတယ်။
SEO ကို Myanmar မှာ ဘာကြောင့်လုပ်ဆောင်သင့်တာလဲ?
ကျွန်တော်တို့ Myanmar မှာ လူသုံးအများဆုံးက Facebook ဖြစ်သည့်တိုင် သင့်အနေနဲ့ Website တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီး Ranking ကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။
သင့်အတွက် SEO လုပ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေကတော့
1) ပြိုင်ဆိုင်မှု နည်းတဲ့နေရာမှာ ပွဲဆူဖို့လိုပါတယ်။
Facebook မှာ လုပ်ငန်းတိုင်း ကြော်ငြာနေကြပါတယ်။ ဘတ်ဂျက်တွေ အပြိုင်သုံးနေကြပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီလိုအပြိုင်အဆိုင်များတဲ့ တစ်နေရာတည်းကို သင့်မာကတ်တင်းအတွက် အားမကိုးသင့်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ SEO လုပ်ဆောင်တာလည်း နည်းနေသေးတာကြောင့် သင့်အတွက် လက်ဦးမှုယူထားဖို့ အများကြီး အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။
2) ရှာဖွေအသုံးပြုတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို ဂရုစိုက်ပါ။
Facebook သုံးတဲ့အခါ သင့် Contents တွေကိုကြည့်မယ်လို့ ရည်ရွယ်ပြီး သုံးတာမဟုတ်တဲ့အတွက် သင့်ကြော်ငြာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ စိတ်ဝင်စားနိုင်သလို ကျော်သွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Google (Search Engine) မှာရှာဖွေတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာကို သိချင်လို့ တကူးတက ရှာဖွေတာဖြစ်တဲ့အတွက် သင့် Website သာပေါ်လာမယ်ဆိုရင် လုပ်ဆောင်မှု Action တခုခုရရှိဖို့ သေချာသလောက်ဖြစ်ပါတယ်။
3) ပြိုင်ဘက်တွေထက် ခြေတစ်လှမ်းဦးထားပါ။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ Facebook မှာ အပြိုင်အဆိုင်များနေသလို ဒစ်ဂျစ်တယ်ကျွမ်းဝင်ပြီးဖြစ်တဲ့ သူများနိုင်ငံတွေမှာ Web Search (SEO) လုပ်ဆောင်ရာမှာ အပြိုင်အဆိုင် ပြင်းထန်ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် လူတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ Google သုံးတာများလာတဲ့အချိန်၊ လုံလောက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေ ရှိလာတဲ့အချိန် ထိပ်ဆုံးမှာပေါ်လာတဲ့ Website က သင် Website ပဲဖြစ်နေပါစေ။
4) ရေရှည်အကျိုးရလဒ်ကို ဂရုစိုက်ပါ။
SEO လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ ရလဒ်ပေါ်ထွက်လာဖို့ ရေရှည်အချိန်ယူရသလို ရရှိလာတဲ့ အကျိုးရလဒ်ကလည်း ပုံမှန်ထိန်းသိမ်း Update လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ရေရှည်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Facebook မှာ Advertise လုပ်တဲ့အခါ ရက်အကန့်အသတ်ရှိသလို ကုန်ကျစရိတ်လည်း ရှိပါတယ်။ SEO ကတော့ ငွေမကုန်ကျသလို သင့်အတွက် ရေရှည်အကျိုးရလဒ်ကိုလည်း ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
5) သင့်လုပ်ငန်းအပိုင် မာကတ်တင်းကို ပိုဦးစားပေးပါ။
Facebook က သင့်အပိုင်မဟုတ်ပါဘူး။ ပိုပိုက်ဆံပေးရင် ပိုပြပေးမယ်။ ပိုက်ဆံမပေးတော့ရင် မပြတော့ပါဘူး။ သင့်လုပ်ထားသမျှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသမျှကလည်း နေ့တွင်းချင်း ပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ သင့်ကိုယ်ပိုင် Marketing Asset ဖြစ်တဲ့ သင့်စိတ်တိုင်းကျ ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ ကိုယ်ပိုင် Website မှာ အချိန်ရော ငွေပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာက ရေရှည်မှာ ပိုအားသာစေပါတယ်။
Professional Website တစ်ခုရေးဆွဲပြီး SEO အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းက သင့်အတွက် ရေရှည်စားသုံးရမယ့် အသီးအပွင့်တွေအတွက် မျိုးစေ့ချနေခြင်းပါပဲ။
SEO လုပ်ဆောင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ DigitalMarketing.com.mm ရဲ့ အတွေ့အကြုံရင့် အဖွဲ့သားများနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါလင့်မှတဆင့် ဖောင်ဖြည့်စွက်ပြီး အခမဲ့ Quotation ရယူနိုင်ပါတယ်။
အခုလိုမျိုး သင့်အတွက် အကျိုးရှိတဲ့ Artilce တွေ လက်လွတ်မသွားဖို့အတွက် အောက်ပါ Form ကိုဖြည့်စွတ်ထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။
အဆုံးထိ ဖတ်ရှုပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ပို့စ်တွေမှာ ပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ။
digital marketing agency in myanmar digital marketing in myanmar Open More Online search engine optimization seo seo agency myanmar seo myanmar
Swan Htet Author October 11, 2020
SEO လုပ်တဲ့အခါ ကိုယ်နားလည်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပဲ လုပ်ဆောင်လို့မရပါဘူး။ SEO တစ်ခုလုံးကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိနားလည်ထားဖို့၊ သဘောပေါက်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် SEO ကို On-page...